» “रञ्जु दर्शना, पनि एमाले,प्रवेश ,गर्दैछिन् ? “रञ्जु दर्शना, पनि एमाले,प्रवेश ,गर्दैछिन् ? – हाम्रो खबर
“रञ्जु दर्शना, पनि एमाले,प्रवेश ,गर्दैछिन् ?
2021, November 10th, Wednesday
हाम्रोखबर संवाददाता 203 Views
“काठमाडौं “वैकल्पिक राजनीतिमा आशा गरिएकी युवा नेतृ तथा विवेकशील साझा पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रञ्जु दर्शना नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्न लागेको खबर बाहिरिएको छ । दर्शनाले पार्टी परित्याग गरेकी छन् ।
“उनले नेकपा एमालेमा प्रबेश गर्ने विषयमा छलफल अगाडि बढाएको श्रोतको दावि छ । ‘उनले आगामी निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको टिकटका लागि बार्गेनिङ ,गरिरहेकी छन् ।’ श्रोतले भन्यो, ‘तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बचन दिन सकेका छैनन् । उनी उपमेयरको टिकट दिदा पनि एमाले प्रबेश गर्ने सम्भावना रहेको बालकोट श्रोतले भन्यो ।”
“तर विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डेले दर्शना एमाले प्रवेश गर्ने विषय हल्लामा भएको बताए । पाण्डेका अनुसार दर्शना कुनै पनि हालतमा एमाले प्रवेश गर्ने सम्भावना छैन ।”
‘मैले रञ्जुजीसँग कुराकानी गरेअनुसार त्यो हुँदै होइन । कुनै पार्टीको चियापानमा जाँदैमा या नियमित भेटघाट गर्दैमा पार्टी नै प्रवेश गर्यो, भन्नु हाँस्यास्पद कुरा हो’, पाण्डेले भने ‘यो हल्लाले राजनीतिमा के महत्वपूर्ण रहेछ भन्ने पनि देखायो । म ,पनि केही अघिसम्म एमाले र कांग्रेसका नेताहरूसँग बसेर आएँ । त्यो हुँदैमा म अर्को पार्टी जान लागेको भन्ने होइन ।’
“दर्शना एमाले प्रवे,शबारे एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीसँग जिज्ञासा राख्दा अनविज्ञता प्रकट गरे । ‘यसबारे पार्टीलाई अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक जानकारी छैन’, उनले भने, ‘आधिकारिक कुनै निर्णय भएछ भने हामी ,जानकारी गराउँछौं ।’
“यसअघि संयोजक मिलन पाण्डे नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी प्रवेश गर्दैछन् भन्ने हल्ला चलेपछि पाण्डेले सामाजिक सञ्जालमार्फत त्यसको खण्डन गरेका थिए ।”
“हालै बसेको विवेकशील साझा पार्टीको बैठकमा अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रको संघीयता खारेज र धर्म निरपेक्षतामा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने लाइन दुई तिहाइले पास भएपछि पार्टी विभाजित भएको छ । निर्वाचन आयोगले समेत मिश्रको निर्णयलाई मान्यता दिएपछि पाण्डे समूह छलफलमा छन् ।”
“यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरोधीप्रति निकै आ,क्रा,मक हुने गर्छन् । उनले पछिल्लो समय नेकपा माओवादी, केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषदका अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराईप्रति शब्दवाण प्रहार गरिरहेका छन् ।”